I-Pelageya - ubomi bomntu, indoda, abantwana, isithombe. Umtshato wasePelagia kunye nomdlali weHockey uTelegina, isithombe
UPelagia waseshada kwakhona! Ifoto yomculi kunye nomyeni wakhe omtsha sele sele ejikeleza zonke iindaba ezidityanisayo. Kuxelwa ukuba uPelagia uthathe intanda yakhe kwintsapho, umdlali weHockey u-Ivan Telegin. Oku, mhlawumbi, yinto yokuqala yokuhlambalaza igama elidumileyo.
Ubomi bomntu bomntu wasePelagia: ingaba kukho indawo yomyeni wakhe nabantwana bakhe?
Umhla wakhe wokuzalwa wama-30 I-Pelageya idibana nomngxube wokubambisana othandekayo eminwe. Kungekudala, ubomi bomculi bomntu obunobomi bufumene inkohlakalo enkulu.
U-Honeymoon Pelageya nomyeni wakhe u-Ivan Telegin bachitha eGrisi
Ingqwalasela eyongeziweyo kumdlali we-actress ixhunyiwe, okokuqala, kunye nencwadana yakhe entsha. I-Pelageya nomdlali weHockey u-Ivan Telegin ixesha elide bafihla ubudlelwane babo. Kodwa iifoto ezisuka kumtshato zazingenakufihlwa. Esi siganeko esivuyisayo sabhalwa ngabahlobo abasondeleyo besi sibini esamenyelwe ukubhiyozela. Emva kwesikhashana, babelana ngokubonisa ubungqina beefoto zolu hlobo oluvuyolayo kumaphepha abo okunxibelelana nabantu.
U-Pelageya no-Ivan Telegin ngoku bandoda nomfazi
Abathandani abazange banelise ukubonisa iimvakalelo zothando, kubonakala kunye ndawonye. Ingaba ngumdlalo weHockey weqela leTellgin okanye ukudubula isiqephu esitsha somboniso "Izwi", apho iPelagia yayingekho ixesha elilodwa lisebenza njengomqeqeshi wabaqeqeshi. Ngoku ngoku lula uguqula iingubo zokubhinqa kwekhonsathi kwi sweatshi yeHockey enegama lomthandi wakhe.
I-Pelageya yenye yezona zithandwa kakhulu ze-CSKA
Ngaba uPelagia unabantwana? Ewe, kwaye akukho nanye. Ngabantwana bakhe, ufanele ukuba acinge ngamatyala avela kwi-"Voice". Abantwana. " Ngokukodwa inkwenkwezi iyavuya ukukhumbula ilizwi likaNastya Titova, oye wavuma ingqungquthela kwikhonsathi enkulu yeKrisimesi eSt. Petersburg, malunga nokusebenza kanzima kunye noKyya Bizina osebenza kanzima owalinde unyaka wonke ukuba enze ngokugqithiseleyo ukubonakalisa italente yakhe, Runel Bogdanov. Ewe kukho - umculi waba ngumama wesibini ngokwenene kubo bonke abathathu abalingana beqela lakhe!
I-Pelageya kunye nabafundi bakhe abancinane abasuka kwi-"Voice". Abantwana »
Esi simo sengqondo kubaculi abancinci asikho ngengozi. Mhlawumbi u-Pelageya ukhumbula kakuhle, indlela enameva ngayo indlela yokuphucula iiprojekthi. Ngokukodwa xa usengumntwana. Le nkwenkwezi yaqala ingoma yakhe yomsebenzi ebuntwaneni. Abaphulaphuli bakhumbula kakuhle umfazi waseSiberia owayenetalente, owahlabelela ingqungquthela yeengoma zikaMyenikazi kwisigaba se-KVN.
U-Pelageya no-Ivan Telegin: ulonwabo kwintlungu yomntu
Mhle, onetalente, ovulekile, othembekileyo - oku kwaziwa kwenkwenkwezi ngabafundi bakhe. Umfazi obulalayo, apho indoda inako ukushiya intsapho - ngomfanekiso ongaqhelekanga ngokwayo, umculi wabonakala phambi kwethu nje kutshanje. Kuyavela, kungekhona into yokuba iPelagia kunye nomdlali weHockey bafihlile ngokucacileyo iimvakalelo zabo.
I-Pelageya ne-Telegin kwiholide kunye nabahlobo
Ngenxa yomculi, le ndoda yashiya umlingane okhulelweyo u-Evgenia Noor. Ngaloo "ithemba leHoloki yaseRashiya" nangona kwakungabonwanga ngokusemthethweni, kodwa kuqwalaselwa kwisiqingatha sesibini. Ngaphambi kwentlanganiso kunye no-Ivan, u-Eugenia wayengumdanso we-striptease. Enyanisweni, "emsebenzini", kwiklabhu, loo mbhangqwana yadibana kunye kwaye phantse yaqalisa ukuhlala kunye.
Umfazi owayengumfazi we-Ivan Telegin
Nangona kuzalwa ngoFebhuwari 2016 kwintsana elinde ixesha elide, uMarko, akazange amkholise umdlali weHockey ukuba abuyele e-Eugene. Abaninzi ngenxa yale nto bathabatha iingalo kwi-star-folk: bathi, U-Pelageya wathabatha umlingane wakhe kwintsapho, eshiya unyana omncinci ngaphandle kobawo! Nangona abameli beengoma babenqaba le nkcazelo. Bathi iithandi zaqala ukudibana emva kokuba umgijimi enqume ukuba ahlukane nomfazi wakhe wangaphambili.
I-Pelageya ne-Telegin: siyavuya!
Ngokutsho kwengcaciso engafanelekanga, ngoku umculi "kwindawo ekhangayo". Le nyaniso ininzi ichaza ukungavumi kobudumi ukuba bathathe inxaxheba kwixesha elizayo leprojekthi "Golos", kunye nokukhishwa ngokukhawuleza kokusebenza kwakhe kwi-rock festival "Ukuhlasela".
Pelageya noDmitry Efimovich: umtshato wabo wawuyimpazamo?
Ukwahlukana kweminyaka engama-11 akuzange kubakhathaze ngabo bonke: U-Pelageya kunye nomyeni wakhe wokuqala uDmitry Efimovich wakwazi ukufumana uvuyo lobomi bentsapho, kodwa nobuhlungu bokudumala kumntu othandekayo. Esinye sezizathu ezinokubangela ukuqhawula umtshato, kukungathembeki komyeni wakhe. Enye inguqu - ukungathandi komculi ukuba nabantwana. Imfuno yeTV, ishedyuli eyinkimbinkimbi yokutyelela nje ayizange ishiye ixesha lentsapho.
Pelageya kunye nomyeni wakhe wokuqala uDmitry Efimovich
U-Pelageya no-Efimovich badibana ne-KVN. UDmitry Efimovich wayengumalungu weqela le-KVN kwiYunivesithi yaseNovosibirsk, kwaye uPelageya wamenywa yi-"asterisk" yeqela elincinci. Kwaye akukho mntu wayenokucinga ukuba emva kweminyaka babeya kudibana kwakhona eMoscow, apho kwakuza kubakho imfesane enobudlelwane.
U-Pelageya noDmitry Yefimovich babonakala bevuya
Umtshato wasePelageya kunye noDmitry Yefimovich wawugcinwe kwimozulu efihlakeleyo. Kuze kube ngoku, iwebhu ayifumani iifoto kule mcimbi. Imfihlelo efanayo yayiqhawule umtshato kunye nomlawuli. Inyaniso yokuba isibini esazange sahlukana ngokucacileyo sibonisa ukuba udumo ngokukhawuleza emva kokuqhawula umtshato kwakhona lithatha igama leNtombi-Khanova.
I-Pelageya kunye noDmitry Efimovich emthendelekweni "Ukuhlasela"
Ngaphambi kokuba abe ngumyeni wasePelagia, uEfimovich watshata noPaulina Sibagatullina, owaziwayo kubabukeli besiteshi seTT njengoMadame Polina woMama weComedy. Ngendlela, ungumlawuli we-comedy TV show. Emva kokuqhawula umtshato, uYefimovich noSibagatullin, abachazi ngomtshato ongaphumeleli. Kodwa phakathi kwezizathu zokuqhawula umtshato, kwakungenjalo ukungafuneki komlingane ukunika u-Efimovich iindlalifa ezinde.
Umfazi wokuqala kaDmitry Efimovich - Madam Polina woMama weComedy
Ukongezelela kwimveliso yexabiso lokubonisa i-Comedy Woman, umlawuli onobuqili wenza isandla ekudaleni uchungechunge lwama-comedy I-Russia yethu, iiprojekthi zeComedy Club, i-satirical mini-series "iMitrich. Ukudandatheka kweRashiya ».
Inyaniso enomdla malunga ne-biography yePelagia
Umdlali wexesha elide wayehlala ehlabathini ngegama eliqhelekileyo elithi Pauline. Ngoko wawungumhla ogqibeleleyo. Emva kokufumana ipasipoti, umculi wayilungisa igama likaPauline ngePelageya eyaziwayo. Ngendlela, igama elifanayo lalinikwa iqela leenkwenkwezi zeerkeki.
I-Pelageya "ikhanyisa" kwikonsathi
Umculi wabonakala kuqala kwisigaba seminyaka engama-4 waza waqaphela ngokukhawuleza: umculo ngumsebenzi wakhe. Nangona kunjalo le nkwenkwezi enekhono lomsebenzi wasemakhaya ukususela ebuntwaneni kubhalwe iincwadi ezinzulu kuphela. I-Rabelais Indalo "uGragantua nePagagruel" umdlali oneminyaka emi-3 ubudala, kwaye kwiminyaka eyi-9 sele esifunde incwadi yesiBulgakov ethi "Master noMargarita."
I-Pelageya ithanda ukufunda, kodwa iincwadi ezinzulu kuphela
Utshintsho olukhawulileyo kumfanekiso womculi - isiteti esicatshulwa kunye nombala weenwele ezilula - abalandeli badibana neentlers. "Ekugqibeleni, kwintombazane engumngqiqo, intombazana yangempela yavuka!" Bathi. Iifoto ezisuka kwi-Instagram zihlaziywa uPelagia uxela ngamawaka abalandeli.
I-Pelagia entsha-ubomi obutsha
I-Pelageya kunye noBilan-isihloko esingazange siphumle kubalandeli bobabini. Kodwa iinkwenkwezi zikhawuleza zihlakaza i-rumors malunga nombolo yabo enokwenzeka. "Sihlobo nje," bathetha ngokuvumelana.
Pelageya noBilan: sinxulumene kuphela ngumhlobo
Kuye "owayekade" uPelagia naye wabeka i-participant yeprojekthi ethi "Izwi" uDmitry Sorochenkov. Kukho ababukeli abangalunganga bobuboniso obukrokrelwayo, xa umculi, njengomqeqeshi weDmitry, ukusuka kwisiqwenga ukuya kwisiqephu eshiya loo mfana. Nangona idilesi yezwi lakhe, walahlekelwa ngokucacileyo kwabanye abathathi-nxaxheba. Amafomu "Izwi" ekugqibeleni wazimisela ngokwabo ngokulandela amazwi kaSorochenkov athi umcebisi omhle wamnqoba waza "waphenduka intliziyo yakhe".
UDmitry Sorochenkov, evakaliswa ukuba abe yintombi yasePelagia
Kodwa, njengokuba uyazi, le nkonzo ye-romance yayidlulileyo. Eyaziwayo ngumdlali weHockey, u-Pelagia onomoya okhethileyo. Kuhlala nje kuphela ukuba banqwenele kubo uvuyo ebomini babo!
Ukhawuleza kangakanani ukulahleka ubunzima kwaye ubukeka buhle?
UTom Hanks: Uvuyo oluvuthiweyo
5 iimpawu zokwenene uthando
Iiplanga ngeeqabunga zamagilebhisi
Ukuxinezeleka: impembelelo yoxinzelelo kwimpilo